जारि सागमा नेपालले जित्यो कीर्तिमानी ५१ स्वर्ण, कुन देशको पदक संख्या कति ? | Diyopost
जारि सागमा नेपालले जित्यो कीर्तिमानी ५१ स्वर्ण, कुन देशको पदक संख्या कति ?
काठमाडौँ, मंसिर २४ । दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३ औँ संस्करणमा ५१ स्वर्ण जितेको छ । सागको अन्तिम खेल अन्तर्गत मंगलबार भएको फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक हात पार्दै जारि प्रतियोगितामा स्वर्णको संख्या ५१ पुर्याएको हो । नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३ औँ संस्करणमा कीर्तिमानी स्वर्णपदक हाँसिल गर्न सफल भएको छ ।
५१ स्वर्णसहित नेपालले कुल २ सय ३ पदक हात पारको छ । जसअन्तर्गत ५८ रजत र ९४ काश्य रहेका छन् । पदक तालिकामा भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ । भारतले सागको जारि संस्करणमा कुल २ सय ९८ पदक जितेको छ । जसमध्य १ सय ७१ स्वर्ण, ८७ रजत र ४० काश्य पदक रहेका छन् । तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलंकाले ३६ स्वर्ण, ८४ रजत र ११६ काश्य सहित कुल २ सय ३६ पदकमा कब्जा जमाएको छ ।
त्यसैगरि पाकिास्तानले २५ स्वर्ण ३२ रजत र ५६ काश्यसहित कुल ११३ पदक जित्दा बंगलादेशले १७ स्वर्ण ३३ रजत र ८१ काश्यसहित १ सय ३१ पदक जितेको छ । निकै कमजोर देखिएको माल्दिभ्स र भुटानले क्रमश ४ र १९ पदक जितेका छन् । माल्दिभ्सले १ स्वर्ण र ३ काश्य जित्दा भुटानले ६ रजत र १३ काश्यमा चित्त बुझाएको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औँ संस्करण कुल १ हजार ४ पदकका लागि भएको थियो ।